Ubuntu 19.04 Disco Dingo. Kuvhurwa kusingazopa chero chinhu | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 19.04 Disco Dingo. Kuvhurwa uko kusinga tsigire chero chinhu
Ubuntu 19.04 inouya neyeYaru theme uye new Wallpaper.
Musi waApril 18, yekutanga vhezheni yeUbuntu 2019 ichavhurwa. Ndiri kuzozvitaura zvisati zvabuda. Ubuntu 19.04 haipe chero chinhu.
Chokwadi, pane nyowani (uye inotyisa) desktop desktop, seti nyowani yemifananidzo, uye zvimwe zvazvino shanduro dzeLinux kernel uye pre-yakaiswa software. Asi izvo hazvisiyanise kubva pane zvimwe zvaburitswa gore rino. Uye chii chakaita kuti Ubuntu isiyanise yaive chaizvo uya nechimwe chinhu chinogadzirwa mushanduro yega yega.
Asi kuCanonical handichafarire vashandisi vekumba.
1.1 Iyo utopia yekutendeuka
1.2 Kudzoka kuGNOME
2 Chii chiri muUbuntu 19.04 Disco Dingo
2.1 Nyaya itsva
2.3 Linux kernel 5.0
Ubuntu yaive imwe yekutanga kugovera mukati kubheja pane live cd. Kuzivikanwa kwaro kwakakura nekuti mumazuva apo vashoma kwazvo vaive neInternet kubatana ivo vakatumira yekuisirwa cd's kune wese munhu. Era nyore kuisa multimedia codecs uye madhiraivha eimba. Iwe unogona kunyange kuisa Ubuntu usina kusiya Windows nechirongwa chakauya neiyo cd.
Canonical Akarota ari iyo Apple yenyika yeLinux. Fedora uye OpenSUSE yaive mibhedha yekuyedza yeRed Hat neNovell. Nharaunda distros saDebian kana Archlinux vaive pane chimwe chinhu. Ubuntu ndiyo yaienda-kune vashandisi vepamba.
Ino ndiyo nguva apo vamwe venyu munomira kuverenga moenda kufomu yekutaura kuti mundiyeuchidze kuti Mandrake ndiyo yekutanga kugovera yakanangana nemushandisi wemba. Ichokwadi, asi ndiri kutaura nezve chimwe chinhu chinopfuura graphical yekumisikidza varoyi. Ndiri kutaura nezve yakasarudzika yekupfeka ruzivo.
Iyo utopia yekutendeuka
Kuburitswa kweumwe neumwe kweUbuntu kwakakonzera kurwa pakati pevateveri veUbuntu kune rumwe rutivi, nevadziviriri verucheno rwemahara software, uye kune imwe pamwe neavo vakati iko kwaitove nekumwe kugovera kwaive kwaita zvakafanana. Izvo hazvina kuitika kwemakore.
Ini ndiri mumwe wevaya vanofunga kuti iko kukanganisa kukuru kweLinux kwanga kusiri kugadzira kwayo Hardware. Vashandisi vakatsigira kwemakore ekudzosera mainjiniya uye nemoyo wakanaka wevagadziri. Nhasi, migove yakaita saManjaro neKDE Neon ine zvibvumirano nevanogadzira mabhuku uye Dell anogadzira Ubuntu makomputa. Asi apo Canonical paakasarudza kuenda kunogadzira chayo chemasanganiswa mudziyo, chaive chinhu chitsva.
Edge yaive smartphone / pc. Nayo pachayo yaive nharembozha senge chero imwe foni yanhasi. Nokubatanidza iyo kune yekutarisa uye keyboard, yakashandurwa kuita komputa yedesktop. Iyo yekushandisa interface yakashandisirwa kune mamiriro. Kunyangwe kuwanda kwemari kwaive kubudirira mumazuva mashoma ekutanga, hazvina kusimudza zvakakwana.
Mamwe maUbuntu 19.04 mifananidzo akagadzirwazve uye rutsigiro rwechitatu-bato kunyorera mifananidzo yakagadziridzwa.
Kubatana, iyo desktop yakagadzirirwa kutsiva GNOME 2, yakakamura mvura. Vamwe vedu vanozvida pakutanga kuona, vamwe vakachinja kugovera. Kunyangwe iyo GNOME 3 yakaburitsa kukakavara kwakanyanya.
Iyo yekutanga vhezheni yaikubvumidza iwe kuona pasocial network, teerera kumimhanzi uye nekutsvaga zvese pakombuta uye online pasina kuvhura zvekushandisa. Yakagadziridzwa software Center iyo yaibvumidza vagadziri ve software uye vanyori vekushambadzira kutengesa zvigadzirwa zvavo.
Nekudaro, Unity yairasikirwa nekushanda. Dambudziko rekuchengetedza akabvisa kugona kuona pasocial network padheshibhodhi. La zvinyorwa zvekugadzira mafomu zvaivhiringidza uye nharaunda yekusimudzira yakagadzirwa neCanonical (Kubva paQT Musiki) kukundikana kazhinji. Kana iwe wanga uchitsvaga rutsigiro muAssUbuntu (zvinova ndizvo zvakakurudzirwa nezvinyorwa), chinonyanya kuitika ndechekuti vaizobvisa mubvunzo kuti vasateerere chero mutemo.
Mhinduro yeCanonical yaive yekumirira Kubatana 8. Asi Kubatana 8 kwanga kusati kwagadzirira. Rimwe zuva tinosangana nayeiye nhau kuti Ubuntu yaidzokera kuGNOME uye ichidonhedza mafoni. Ainge atosiya zvake smart TV project.
Pamwe nemukana bhizinesi reShuttleworth rave kuita purofiti. Corporate kufarira gore, munda umo iyo kambani yakanga yambopayona, kwakariunzira vatengi vakuru. Kune rimwe divi, iyo mania yevagadziri yekubatanidza chero chishandiso kuInternet chakakurudzira vhezheni yavo yeInternet yezvinhu.
Mukufungidzira kuvhurwa kwayo, zvaive zvakakodzera kuisa mutoro pairi. Ndokunge, chirevo changu chekutanga kwechinyorwa. Hapasisina zvitsva zvevashandisi vekumba. Kunze kwekunge ivo vanogona zvakare kushandiswa mugore uye neInternet yezvinhu.
Chii chiri muUbuntu 19.04 Disco Dingo
Ngatimboongororai nhau ipapo? yeiyi vhezheni itsva
Yaru, iyo default theme yakatumirwa muUbuntu 18.10 haina kutsigira mifananidzo yezvakasiyana-siyana zvechitatu-bato kunyorera. Mifananidzo yenguva dzose yezvishandiso izvi haina kuenderana chaizvo neiya akaiswa iwo. Izvo dambudziko rekushongedza rakagadziriswa. Uyewo yakachinja ma icon eiyo software centre, marara anogona uye neepaneru yekumisikidza. Iyo desktop desktop, csezvinoitika neshanduro imwe neimwe nyowani, inowirirana nechipfuwo. Kana saka ndinofungidzira. Kana mumwe munhu akaona chero chakafanana nedingo, vaudze.
Vamwe vanoti iro desktop rinotaridzika richiwedzera kufanana neGNOME yekutanga pane Kubatana, kune yangu chikamu ini handigone kuve nechokwadi.
Ubuntu kwete inotora ese akazara maficha eGNOME vhezheni 3.22. Mune zvimwe zviitiko izvi zvakanaka kumushandisi. Tinogona uchiri nemifananidzo padesktop uye padivi pani iripo zvachose. Zvakare, Izvo (zvakanyanya kudiwa) software centre zvinowedzerwazve uye zvinodzora kuti zvibvise zvidimbu zvinokatyamadza muHiDPl hazvina kubatanidzwa.
Ruzivo rukuru rweiyi vhezheni rutsigiro rwemakadhi ekumusoro-ekupedzisira eADD, CPU performance performance inovandudzwa uye kutsigirwa kweakawanda Hardware.
Livepatch chiitiko icho Inokutendera iwe kuti uise zvekuchengetedza zvinowedzera mu kernel pasina kudiwa kwekuitazve hurongwa. Izvo zvinongoshanda chete neshanduro dzakawedzerwa dzekutsigira. MuUbuntu 18.04 pakanga paine tebhu mune yekuvandudza application iyo yaibvumidza kuimisa. Sezvo isiri yakawedzerwa rutsigiro, vhezheni 18.10 haina kuisanganisira. Nechimwe chikonzero vanoidzorera muna 19.04 kunyangwe vaine chiziviso chekuti basa racho harisi kuwanikwa.
Kana iwe uchida kuziva maonero angu, nekuda kweinonakidza iyi vhezheni kupfuura Disco Dingo inofanira kunzi Kurara Dromedary.
Kunyange hazvo isiri mhosva yeCanonical yese. Iyo desktop yemakomputa musika haina zvakawanda zvekupa zvekare. Kunyangwe iwo mamodheru matsva emafoni anongowedzera makamera kana mukana wekupeta.
Kana isu tichida manzwiro isu tichafanirwa kuitsvaga muArduino, Raspberry Pi kana Nvidia Jetson.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Ubuntu 19.04 Disco Dingo. Kuvhurwa uko kusinga tsigire chero chinhu
Kugadzikana. Nezvo ndinotenda zvikuru.
Ndatenda nekutaura. Kugadzikana kunofanirwa kutorwa sezvisina basa, zvinosuwisa kuti izvi hazviwanzo kuitika.
Nezve iyo Wallpaper icho chimwe chinhu chega, ndinochida uye ndinacho muDebian asi zviri pachena, semari yangu yese ini ndinochichinja nguva nenguva. Kune rimwe divi, munhau, ndinofunga kuti hatifanire kumirira kwenguva refu kubva kuCanonical, sekutaura kwako, kufarira hakusi kune vashandisi vese, asi mumasevhisi egore ... zvinonyadzisa asi kana ndiri kukanganisa, ndizvo kambani, uye nekudaro vanotsvaga kuwana mari
Ini ndinoda iwo akavhurika sosi makambani anoita mari. Asi ini ndinosuwa mweya wekuvandudza.
Ini ndinofunga kuti mushure memakore angangoita gumi uine smartphone, mumwe munhu anofanira kunge akatofunga zvekusanganisira iyo keyboard software mune imwe OS (zvakaitika kwandiri makore anoda kusvika matatu apfuura!), Izvo hazvigone kuti ndiyo yakachipa kwazvo smartphone, yakanyanya software yekare ine izvi chimiro uye hapana laptop kana pc (hapana OS) inozvipa.
Linux ine pane-skrini keyboard mune yekuwanika sarudzo. Uye ndinofunga ndaona iyo WIndows futi.
Ini ndanga ndichiona kuti GSConnect inobvumidza iwe kushandisa iyo keyboard yeiyo pc pane nharembozha isina waya, asi ini handina kuitora kuti ishande.
Ruzhinji rwevashandisi havatarise manzwiro epamba muhurongwa hwekushanda saizvozvo, asi ivo vanoda kuita basa ravo uye kuti zvinhu zvishande. Iwo madhesiki asvika padanho rekukura iro risingade kuchinja zvakanyanya panguva ino.
Wataura chokwadi, asi panguva ino handizvione ndichitanga bindu rebindu. Kana pasina nhau handifanirwe kunyora.
Ndingafarire kukwanisa kushandisa linux zvakare nekuda kweiyo terminal nyaya, mazuva mashoma apfuura ndakaiisa palaptop yangu zvakare pamwe nemawindows asi mushure mematambudziko mazhinji nemifananidzo uye trackpad ini handina kukwanisa kuita kuti yekutarisa kwekunze ishande.
Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei ndaifanira kusiya linux, nebasa handina nguva yekutanga kusiya zvese zvichishanda zvekare mushure mega gadziriso.
Zvandisingade nezve ubuntu ndezvekuti ini handikwanise kutanga live iso pamwe neyekudyira nvidia madhiraivha, ndinosungirwa kune inotyisa nyowani, macodecs haana kuiswa kuti aridze zvakapusa odhiyo kana vhidhiyo mafaera, chete iwo ari zana % yemahara, kureva kuti, hapana mp100, hapana flac, hapana h3 mavhidhiyo mashoma h264, nezvimwewo, inyaya yehungwaru kupa mushandisi mukana wekutora kubva panguva yekutanga izvo zvisingakwanise kushayikwa muOS inoda inofungidzirwa yazvino uye inoshanda.
Parizvino ndiri kufara manjaro sinamoni, uye ini handisi kuzochinja distro.
Ini ndaive mushandisi wehunhu kusvika 10.04, pandakasiya gnome 2, ndakachinja kuenda kudian xfce kwenguva yakareba, nhasi ndinosarudza distro ine yakapusa, yemazuva ano uye inoshanda nharaunda, iyo isingatambise nguva yangu kuisa kana kugadzirisa zvinhu zvinofanirwa uya pre-kuiswa ne default.
Pindura kuna daeee
Pane nzira yekuzviita. Pisa pendrive inogonesa kutsungirira, uchiwedzera izvo zvinyorwa uye nekuisa iwo madhiraivha. Asi sekutaura kwako, kuva nema distros anokutendera kuti ugone kugonesa vatyairi kubva pakutanga chinhu chisina musoro.
Jesuhadin Perez akadaro
Akanaka mavara Diego ... unoziva zvauri kutaura nezvazvo uye unoziva kuzvinyora mushe. Bvumirana newe. Pane chete chimwe chinhu chiri nani pane chako post ... «mhinduro dzako kumashoko». Iwe wakanaka. Ndatenda.
Pindura kuna Jesuhadin Perez
Ini ndatova necheki ndakakugadzirira. Tora iyo pese paunoda.
Christian Echeverry akadaro
Ini ndinobvuma, muchidimbu, neiyo posvo, ndanga ndiri mushandisi weUbuntu kwemakore mazhinji, ndanga ndiri kuburikidza naDebian naArch, mune zvinyorwa zveDebian zvakatorwa zvachose uye pasuru yacho yakati rebei, asi yakagadzikana sedombo, muArch inoitika zvakapesana, iwe une zvese zviripo parizvino asi imwe yekugadzirisa inogona kugadzirisa chimwe chinhu chinoshandura kugadzikana kwesystem, hapana nzira.
Ndinoyeuka pandakanga ndiri kuchikoro uye ndikakumbira maUbuntu maCD kuti aise pane yangu yekare laptop, munhu wese akanditarisa senge weirdo, nguva idzodzo, ndaishuvira maficha matsva, madingindira matsva, nezvimwe, ikozvino izvozvi zvakasiyana, ivo ingo gadzirisa leave inoshanda chete uye wedzera imwe vara, pamwe chengetedza musika.
Ini ndinofunga Ubuntu akanetesa, kana ini ndatokwegura, handizive.
Pindura kuna Cristhian Echeverry
KDE Kunyorera 19.04 yatove mubeta yekuyedzwa